बिदामा घर बसेका विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने?
प्रा डा विद्यानाथ कोइराला बिहीबार, चैत ६, २०७६, १८:४६
कोरोना भाइरस सङक्रमणको त्रास संसारभर फैलिएको छ। धेरै भिडभाड हुने सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएका छन्। स्वभाविक रूपमा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो। ढिलै भएपनि सरकारले एसइई परीक्षा स्थगन गरेको छ। अतिआवश्यक कामबाहेक घरबाहिर नजान आग्रह गरिरहेको छ।
यस्ता महामारी विश्वमा फैलिरहन्छन्। कुनै समय झाडापखाला, हैजा, मलेरियालगायतका रोगले पनि मानिसको ज्यान लिन्थ्यो। पहिले महामारीका रूपमा फैलिएको रोग अहिले वैज्ञानिकले भ्याक्सिन तथा औषधि पत्ता लागिसकेका छन्। त्यसैले उतिबेला डरलाग्दा भनिएका कतिपय रोग निर्मुल पनि भएका छन्।
केही दिनअघि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले मानव सभ्यताका क्रममा विभिन्न रोग फैलिएको र मानिसको ज्यान लिएकोले अफवाह नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो। सही सूचना दिनु सञ्चार माध्यमको दायित्व हो तर केके न भएको जसरी आतंकित बनाउन भने हुँदैन। आपत आइरहन्छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्‍यो।
एसइईलगायतका परीक्षा स्थगन गरी नै सकेपछि यसबारे बहस गर्ने बेला होइन यो। स्वभाविक रूपमा परीक्षा स्थगन गरिएपछि मनोवैज्ञानिक तनाव त हुन्छ नै तर महामारीसँग जुध्ने जोखिम उठाउनुहुन्न। परीक्षार्थी विद्यार्थी सबै उमेर समूहको लागि उस्तै चञ्चलता हुन्छ। के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा लाग्छ नै। केही कुरामा ध्यान दियौँ भने यो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ।
यो बेला मिडियाको भुमिका प्रमुख हुन्छ। मिडियाले कस्ता सामग्री दिने कस्ता सामग्री दिने भनेर विचार गर्नु पर्छ। परीक्षार्थीलाई टार्गेट गरेर विषयगत प्रश्न बनाएर उत्तर खोज्न अभिप्रेरित गर्न सक्छ।
आजको युगमा सानो केही घटना भयो भने धेरै सूचनाले कन्फ्युजन निम्त्याउँछ। त्यसकारण मिडियाले दिने सूचनामा सत्यतथ्यमा ध्यान देओस्। अफवाह फैलाउने शैलीले प्रस्तुति नदेओस्। भाइरस के हो? ब्याक्टेरिया के हो? कसरी फैलन्छ सचेत गराउनमा लागि परोस्।
अनलाइन मार्फत पढाओस्
भाइरस फैलिएको देशमा विभिन्न सफ्टवेयरमार्फत् पढाइएको छ। विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्न पाएका छन्। हाम्रा विद्यार्थीलाई पनि अनलाइनमार्फत पढाउन सकिन्छ। फेसबुक लाइभमार्फत् अथवा अरू कुनै उपायबाट पढाउन सकिन्छ। प्याब्सन, अभिभावक संघ र शिक्षक महासंघले फुर्सदको यो समयमा घोत्लिउन् नयाँ तरिकाले कसरी पढाउन सकिन्छ भन्नेबारे। यस्ता उपायपछि पनि काम लाग्न सक्छ।
एकअर्कालाई बुझ्ने मौका
छोराछोरीले आफ्नो कुरै नसुन्ने, घरको काममा मन नलागाउने भन्ने धेरैजसो अभिभावकको गुनासो रहन्छ। यो समयमा छोराछोरीलाई काम सिकाउन सकिन्छ। छोराछोरीको मनोभावना बुझ्न सकिन्छ। आफ्नो कुरा पनि सेयर गर्न सकिन्छ।
शिक्षामा व्यवहारिकता खोज्ने
अनलाइनमार्फत् विद्यार्थीलाई नयाँ ढगंबाट पढाउन सकिन्छ। शिक्षकले प्रश्नलाई खुला मोडबाट सोध्न सक्छ। जस्ता मानौँ नेपालीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता पढेको छ। यो समयमा घरमा अभिभावकले गाउने कविता तथा गीत संकलन गर्न लगाउनुस्। अनि कोर्सबुकमा भएको कवितासँग तुलना गर्न लगाउनुस्। यसले उनीहरूमा व्यवहारिकता बढ्दै जान्छ।
विपत्तिमा आत्तिन हुँदैन। हरेक विपत्तिलाई सिर्जनामा ढाल्नुपर्छ। यो समयमा आफूलाई मन लागेको तर समयले गर्दा नभ्याएका काम गर्न सकिन्छ।
प्रजु पन्तसँगको कुराकानीमा आधारित